Haddii aad hesho tigidh buuq…
Marka hore, isweydii: "Miyaan dareemayaa mas'uuliyadda dhalinta buuq saameyn xun ku yeeshay bulshadayda?"
Hadday MAYA tahay, waxaad xaq u leedahay inaad u tartanto tigidhkaaga. Waxaa jira ganaaxyo kala duwan oo aan laga dhaafi karin. Wixii macluumaad dheeraad ah, kala xiriir Xafiiska Qareenka Magaalada (802) 865-7121.
Hadday HAA tahay, waxaad xaq u leedahay inaad kaqaybqaadato Barnaamijka Buuq-celinta Dib-u-habeynta Xarunta Caddaaladda Bulshada ee Burlington. Nala soo xiriir toddobo (7) maalmood gudahood laga bilaabo helitaanka tigidhkaaga si aad u ballansatid ballan qaadasho. Kala xiriir Anthony Jackson Miller taleefanka (802) 557-7232 ama emayl amiller@burlingtonvt.gov .
Barnaamijka Dib-u-habeynta Baahida Fiican ee Buuq
Saamaynta buuqku waa arrin weyn oo ka jirta xaafadaha magaalada hoose ee Burlington. Barnaamijka buuqa ee Xarunta Cadaalada Bulshada ee Burlington wuxuu bixiyaa jawaab celin kucelinta tikidhada buuqa ee wax u dhimaya qofka buuqa dhaliyay iyo bulshada guud ahaan. Haddii aad hesho tigidh qaylo ah oo aad si xushmad leh u aqbasho mas'uuliyadda sababista sawaxanka oo saamayn taban ku yeelan kara bulshada, waxaad xaq u leedahay inaad kaqaybqaadato Barnaamijka Buuqda Dib-u-habeynta.
Tigidhada xafladaha / bulshada: U yare lacagtaada ganaax dhan $ 100 adoo kaqeyb galaya kulan 1/2-saac ah halkaas oo aad ku baran doontid taariikhda Burlington's Noise Ordinance, sida looga fogaado tigidhada mustaqbalka, iyo siyaabaha lagu xaliyo arinta buuqa bulshadeena. Iska yaree ganaaxaaga $ 100 dheeraad ah adoo fulinaya 10 saacadood oo ah adeeg bulsho oo la oggol yahay.
Tigidhada guud ee buuqa: Iska yaree ganaaxaaga $ 100 adoo fulinaya 10 saacadood oo adeeg bulsho oo la oggol yahay.
Ganaaxyada laga bixiyo Xarunta Caddaaladda Bulshada ayaa loo tagaa Sanduuqa Dhibbanayaasha Caddaaladda ee Isku midka ah , kaas oo ka caawiya dhibbanayaasha dambiyada sidii ay u soo celin lahaayeen baahidooda nabadgelyo.
Helitaanka tigidhka kaligey ayaa i baraysa inaan buuq sameynin si aanan u bixin ganaax. Khibraddan ayaa iga caawisay inaan arko in aanan sameyn buuq maxaa yeelay waxay dhaawaceysaa deriskeyga. ”
- Ka-qaybgalaha barnaamijka UVM iyo barnaamijka buuqa